Handrara ny Habaka Mamohafady i Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Handrara ny Habaka Mamohafady i Ejipta
Voadika ny 07 Novambra 2012 23:03 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Português, Magyar, Español, عربي, Italiano, srpski, বাংলা, English
Nanambara [ar] i Ejipta androany fa horàrana ny fidirana amin'ny habaka mamohafady. Niadihevitra momba izany tao amin'ny Twitter ny mpiserasera, izay nanombana karazana sivana izay hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahalalaham-pitenenana – manokatra varavarana amin'izay ho fanararaotam-pahefana ataon'ny manam-pahefana sy ny fanampenam-bava ny feo ao amin'ny aterineto izany.
Mpampianatra momba ny asa fanaovan-gazety sy ny fifandraisana aman'olona, Rasha Abdulla nanambara hoe:
@RashaAbdulla: Nangataka tamin'ireo voakasik'izany ny mpisolovavan'ny fanjakana mba hanatanteraka ny baiko amin'ny fanakatonana ny habaka mamohafady
Mohammed Hendawy nanamarika hoe:
@The_Hendawy: Manomboka amin'ny mamohafady izany. Dia ny sisa hafa avy eo.
@LuluDeRaven nanazava hoe [ar]:
@LuluDeRaven: Fanapahan-kevitra handràra ny habaka mamohafady = sivana amin'ireo zavatra izay tsy tiany na tsy azoazony ao amin'ny Aterineto – na izany mikasika ny politika, ny zavakanto, literatiora sy ny tantara .. fanoherana .. bilaogy .. tranonkala tambajotra sosialy
Tarek Shalaby nanome vahaolana sahady mikasika izany fanapahan-kevitra izany:
@tarekshalaby: Hanao bilaogy fampianarana aho mba hampisehoako ny fomba hanakanana izany
Guebara nanamarika hoe:
@Gue3bara: Te-handany vola amin'ny fanakatonana tranonkala mamohafady ianao fa tsy te-handany izany vola izany any amin'ny dokotera?
Amal nanontany hoe:
@Amalegypt: Tsy misy olona hikarakara sit-in ho fanohanana ny habaka mamoafady ve? Sa resaka tsy ilàna fanohanana izany?
@nermo nanampy tamin-katezerana hoe:
@nermo: Maharikoriko kokoa ny tranonkala mamohafady noho ny habibiana eny amin'ny tobin'ny polisy, ny kolikoly, ny halatra sy ny vono-olona ary izany no anton'ny tsy hisian'ny fandriampahalemana ao Sinai. Rehefa mikatona avokoa ny habaka mamohafady , ho voavaha daholo ny olana eto amintsika.
Azia Afovoany sy Kaokazy 22 ora izay